ပိတ်ရက်လေးရတုန်းမှာ အလုပ်လုပ်ရအောင် - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
thuwunnaoscar မှ January 4, 2012 4:11pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကာလ ပိတ်ရက်ရှည်ရကြအုန်းမယ့် ပြည်ပရောက်အလုပ်သမားတွေ အလုပ်ပိတ်ရက်လေးရတုန်းမှာ သံသရာအတွက် အကျိုးဖြစ်စေမယ့် အလုပ်ကအသင့်စောင့်နေပြန်ပါပြီ ယခင်နှစ်တွေမှာလဲ အလည်အပတ်တွေ အပျော်အပါးတွေကို စွန့်ပြီး ရောက်လာသူတွေ အများကြီးပါပဲ ဒီနှစ်အတွက်ကို ဒီနေ့ကစပြီး ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းထားနိုင်ပါပြီ ကွာလာလမ်ပူမြို့ တမန်ဆွန်ဂိုင်းဘီစီအရပ်မှာရှိတဲ့ သတိပဋ္ဌာနဓမ္မရိပ်သာ မှာ တရားစခန်းဝင်လိုတဲ့ ရဟန်းယောဂီ လူယောဂီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး မည်သူမဆို နာယကကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တနာရဒ ၀၁၆၆၀၂၅၅၃၆ ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး စာရင်းပို့ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် လူဦးရေ ၂၀ သာလက်ခံမည်ဖြစ်တဲ့ အတွက် နောက်ကျနေလို့တော့ မဖြစ်ဘူးဆိုတာအသိပေးပါရစေ လူဝတ်ကြောင်ယောဂီအဖြစ် တရားစခန်းဝင်ရန် ဒုလ္လဘရဟန်းဝတ်ရန် ရှင်သာမဏေပြုရန် အတွက် မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်မှ မရှိကြောင်းလည်းကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်တရားစခန်းမဝင်နိုင်လို့ ရဟန်းယောဂီများ လူယောဂီများ၏ ဆွမ်းကွမ်းဝေယျာဝစ္စ ဖြည့်ဆည်း ဒါနပြုလိုသူများအားလည်း မိမိ တာဝန်ယူလိုသော ဆွမ်းပို့ရမည့်နေ့ အချိန်များကို စုံစမ်းနိုင်ပါပြီ ။
စတင်မည့်ရက် ၂၁.၁.၂၀၁၂ စနေနေ့
ပြီးဆုံးမည့်နေ့ ၁.၂.၂၀၁၂ တနင်္ဂနွေနေ့
မိမိသည် ခွင့်ရက်ရှည်မရပါ သို့သော် ရက်ပိုင်းမျှ စခန်းဝင်လိုပါကြောင်းကိုလည်း အကြောင်းကြားမေးမြန်းနိုင်ပါသည် ။
မှတ်ချက် ။။။ ဝိပဿနာတရားအားထုတ်မည့်ရဟန်းယောဂီများအားဧည့်သည်တွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
တရားအားထုတ်ခြင်းမှလွဲ၍ မည်သည့် အပိုကိစ္စမှ စခန်းကာလအတွင်း ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
stipatthana meditation centre , no.37 second floor , jalan 3/108c .
taman sungai besi . (57100) kuala lumpur , Malaysia .
office: 03 7971 3267 ... hp: 016 6025536
ဘလော့အမျိုးအစား(ဘာသာရေး, သတင်း) Like0members like this
htin lin thar သည် January 4, 2012 က 6:07pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ thanks RSS
Nu Nu ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Nilar Htet Htet Aung
Top News · Everything moh moh commented on dimplemit's blog post 'ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....'"Thzalot I agree your thinging wisdom all rihght congratulation fri your knowledge excellent .Pls…"51 minutes ago♫ ♥ မှုံနံ.သာဖြူ ♥♫ liked dimplemit's blog post 'ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....'1 hour agomoh moh liked dimplemit's blog post 'ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....'1 hour agoNilar Htet Htet Aung commented on dimplemit's blog post 'ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....'"Thanks for sharing. I agree your thinking of the most important thing in life. I'll try my…"1 hour agodimplemit posted blog postsဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....အတိတ်မှသမထနှင့်ဝိပဿနာအထုံတို့ပစ္စုပ္ပန်တွင်အကျိုးပေးပုံ1 hour agoashinvishittathara commented on နီစံ (အနီ)'s group 'အဘိဓမ္မာ ဌာန'"ဒီနေရာကိုလာလည်ခွင့်ရလို့အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်"2 hours agoashinvishittathara joined နီစံ (အနီ)'s groupအဘိဓမ္မာ ဌာန-အဘိဓမ္မာ သင်ယူလေ့လာရန် -အဘိဓမ္မာ ရေးရာ ဆွေးနွေးနှီးနှောဖလှယ်ရန်See More2 hours ago 19
kham liked မူကြိုဆရာ's blog post 'မေတ္တာလေ.ကျင်.ခန်း'2 hours agoမတင်တင်မိုး commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်သင့် အချက်များ'"Thanks..."2 hours agoHtain Lin Oo liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် ဒေသနာဆိုသည်မှာ'3 hours agoကောင်းမြတ်ဇော် commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post '(၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း'"စင်္ကာပူမှ အလှူရှင်တဦးမှ စင်္ကာပူဒေါ်လာ $၅၀ လက်ခံ ၇ရှိပါသည်။ ယခုလို စေတနာသုံးတန် ပြဠာန်းကာ လှူဒါန်းမူ…"4 hours agoလှိုင်ကျော်ထွေး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post '(၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း'"အလှူရှင် မနန်းယုမှ လှူဒါန်းငွေကျပ်-၂၀၀၀၀/-(ကျပ် နှစ်သောင်းတိတိ) ကို လက်ခံရရှိပါတယ် ခင်ဗျာ..။ယခုလို…"5 hours ago More... RSS